ရွှေ့ပြောင်းပညာရေးဒေသ ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ
Posted on July 30, 2011	by bmta05
၃၀၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၁ ။
This entry was posted in လှုပ်ရှားမှုများ, သတင်း. Bookmark the permalink.
ကလေးသူငယ်အကါအကွယ်ပေးရေးစီမံချက် အသိပညာပြန့်ပွားရေးအစည်းအဝေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများလေ့လာလိုပါသည်